Ingeosolum wuxuu sii daayaa wargeyska - Geofumadas
Ogast, 2009 Engineering
Dhowr bilood ka hor shirkadda Ingeosolum waxay soo saartay fariin elektaroonig ah oo ay ku wargalinayaan wax ka mid ah waxa ka dhacaya aagga injineeriyadda, gaar ahaan kuwa yaryar. Tani waa shirkad wadista baabuurta Geo5, laga bilaabo FINE Software, oo aan dib u eegay waqtiga kale.
Daabacaadkan labaad waxay ku tilmaamayaan dhowr dhacdooyin oo ka dhacay bartamaha dhexe:
Kulanka VIII Golf ee Iskuulka Engineersaalayaasha ee Hawlaha Guud ee CIT munaasabadda xafladaha loo-shaqeeyaha Santo Domingo de la Calzada, ee Olivar de la Hinojosa Course.
Koorsada caalamiga ee Geotechnics iyo injineerka Tunniga iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 3D FEA Midas GTS, kaas oo lagu qabtay Delft, Netherlands. Araajida la tixgeliyey kooraskan waxaa ka mid ah:
Dhibaatooyin qoto dheer
Isdhexgalka qaabaynta dhulka
Qaababka xayiraadda dhulka
Falanqaynta iyo falanqaynta isku dhafka
Intaa waxaa dheer, bayaankan sidoo kale wuxuu ku jiraa tixraac kooban oo ku saabsan aasaaska mashiinka micu-mareenka ah ee firfircoon.
Si aad u hesho wargeyska, waa inaad iska diiwaangelisaa markaad soo dejiso barnaamijka bandhigga, ama la xiriirto mid ka mid ah emails xiriiriye.
Post Previous«Previous Ku beddel sawirrada vector
Post Next PC ugu badnaan, magazine ahNext »